WordPress 5.4: Nke mbụ nnukwu ntọhapụ nke afọ 2020 | Site na Linux
Este Machị 31, 2020 ga-abụ nke mbụ isi ntọhapụ nke WordPress, kpọmkwem na 5.4 mbipute, mgbe ogologo mmepe dum okirikiri na otu na malitere na 15 de enero de 2020, ke akpa «Nzukọ Kickoff» gbasara ya.
Ihe ohuru 5.4 mbipute, nke a ga-ewepụta n'oge na-adịghị anya, kwere nkwa weta ọtụtụ atụmatụ ọhụụ na nke ọhụụ, gbakwunyere ụfọdụ ndozi na mmezi ahụhụ maka Gutenberg nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ, nke gunye kwa otutu nke plugins na-arụ ọrụ na isi ya. Na nkenke, ọtụtụ mgbanwe ndị a gụnyere ga-emetụta ma arụmọrụ yana ihe Ntuziaka onye ọrụ (GUI), imeziwanye ụzọ anyị si arụ ọrụ na nchịkọta akụkọ, n'ozuzu ya.
Tupu ịza ajụjụ na "Ozi ọma" N'ime ụdị a, ọ bara uru ichetara ndị na-amachaghị ihe banyere WordPress, na ọ bụ otu. Na ederede gara aga, anyị kwuru na WordPress bụ ihe magburu onwe ya "CMS" Olekwa, CMS na WordPress bụ:
1 Echiche ndị dị na ya
1.1 Kedu ihe bụ CMS?
1.2 Kedu ihe bụ WordPress?
Echiche ndị dị na ya
“An Integrated Development Environment (IDE) nke na-enye anyị ohere ịmepụta, jikwaa, chekwaa ma melite weebụsaịtị, na mgbakwunye na onwe ya. Na na n'ozuzu na-agụnye ụfọdụ ego nke nhọrọ na ụma ọrụ, dị ka: Ndepụta Ngwaahịa, Map saịtị, Foto veranda, Gburugburu, Mmezu, Shozụ ahịa ụgbọ ala, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ ”.
“WP bụ CMS siri ike nke nweere onwe ibudata ma jiri ya, mana ọ dịkwa nnukwu ma nwekwaa nnabata nnabata na ọrụ mbipụta, nke a maara dị ka WordPress.com nke na-enweta mmelite nke ukwuu. O nwekwaa nwanne nwanyị ọzọ aha ya dị ka WordPress.org Ọ dịkwa na Spanish. O nwere nnukwu ihe omuma na akuko oru ”.
Maka ozi ọzọ na WordPress na nsụgharị ya 5.X, ị nwere ike ịgagharị akwụkwọ anyị gara aga n'okwu a:
Kedu ihe bụ CMS? Utility na atụmatụ
Ntughari ohuru 5.2 na otutu ihe banyere WordPress
Gburugburu 2019 WordPress na Plugins
N’ọnwa nke ọnwa Machị 2020, a tọhapụrụ ha 5 Ndị Ntuli Aka Hapụ (RC), nke bụ RC1 (03/03/2020), RC2 (10/03/2020), RC3 (17/03/2020), RC4 (24/03/2020) na RC1 (27/03/2020) ma ha hapụrụ anyị ka anyị bụrụ ihe akaebe akụkụ nke atụmatụ ọhụrụ ndị a ga-ejikọ ọnụ na nsụgharị ikpeazụ. N'ime ha, anyị nwere ike ịkọwa n'ụzọ zuru ezu, ndị a kpọtụrụ aha n'okpuru:
Typesdị edozi ndezi ọhụụ na ndozi na nchịkọta akụkọ nchịkọta, bara uru maka ndị ọrụ.
Ntinye ohuru ohuru na ndozi, bara uru maka ndi ochichi.
122 ndozi na atụmatụ tinyere 210 ahụhụ fixes, bara uru maka ndị mmepe.
Banyere nnweta, enwere mmelite ohuru 14, otu n’ime ha bụ mgbanwe na Ogwe Nchịkwa WordPress, na kalenda na na wijetị na-ekwu na nso nso a, na ihuenyo NchNhr, na njehie nke akụkọ WPCampus na-enweta.
Na ọkwa nchịkọta akụkọ Block, 7.5 ọhụrụ nke Gutenberg na-etinye ndozi ahụhụ niile na mmelite arụmọrụ nke nsụgharị 10 gara aga gara aga, na ụfọdụ n'ime ihe na-esote iji dịrị n'ọdịnihu 7.6.
Banyere WordPress 5.4 postsNdị a ga-abịa ugbu a n'ụdị atụmatụ na nkwalite ọhụrụ ndị a chịkọtara site na nsụgharị ndị gara aga, na-ekwe nkwa imeta 14% Mbelata na oge ntinye yana 51% Mbelata oge iji dee (maka ogologo oge ogologo nke ~ 36.000 okwu, ~ 1.000 blocks) na-eme ka atụnyere ya na nke gara aga, WordPress 5.3.
Ka o sina dị, ndị a bụ ole na ole n’ime ọtụtụ akụkọ ọhụrụ a na-ewetara anyị, nke a ga-ewepụta n’oge na-adịghị anya. Ọ bụ ezie na ị ga-enweta nkọwa zuru ezu karị, ị nwere ike ịnweta njikọ ndị a na Bekee: The WordPress 5.4 Ubi Guide
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «WordPress 5.4», Kedu ihe ọ bụ «El primer gran lanzamiento del año 2020», nke na-eweta ozi ọma maka oke a «CMS», nke na-apụ apụ mgbe niile maka ịbụ sọftụwia emere ka ọ pụta ìhè na nnweta, arụmọrụ, nchekwa na ịdị mfe nke iji, bụrụ ya mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » WordPress 5.4: Nnukwu Mbido mbụ nke 2020
Plasma Bigscreen: ihe eji eme KDE maka smartTV